नेपाल आज | प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहँदैनन ( भिडियोसहित )
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । यो एजेण्डा सरकारले बनाएको होइन, नागरिकस्तरबाट तय भएको हो । सरकारका मन्त्री, जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका एकपछि अर्को प्रमाणहरु भेटिन थालेपछि देशभर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन भैरहेका छन् ।
समाजवादी पार्टी, नेपालका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र नीतिले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । राज्यका शक्तिशाली प्रमुख निकाय आफू मातहत राख्नु, ठूलो आयोजना सिधै ठेक्कामा दिने व्यवस्था गर्नु, राज्यका सार्वजनिक संस्थामा आफना मान्छे मात्र भर्ती गर्नु लगायतका काम असल नियतका साथ भएका होइनन् । यस्तो शैलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने उनको भनाइ र गराइमा आकास पातालको फरक देखायो । यसबाट पुष्टि हुन्छ उहाँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहनु हुन्न । ’
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गलत
प्रधानमन्त्री ओलीको नियतै गलत छ भनेर तत्काल भन्नु हतारो हुन्छ, तर उनका सल्लाहकार भने गलत छन्, यो सत्य हो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफना सल्लाहकार बदल्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको गलत सुझावका कारण प्रधानमन्त्री र सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा बदनाम गर्ने, सरोकारवाला पक्षसंग सल्लाह नै नगरी विवादास्पद विधेयक लिएर आउने, होली वाईन पिउने, धर्मान्तरको अभियान चलाएको बदनाम विश्वविद्यालयको मानार्थ विद्यावारिधि लिने, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा बन्ने लगायतका थुप्रै काममा सरकार फँसेको छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको अयोग्यताको प्रमाण हो ।
भ्रष्टाचारमा प्रचण्डको साथ
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौनता साँधेर सरकारी तवरबाट भैरहेको भ्रष्टाचारलाई साथ दिएका छन् । प्रचण्डक किन चूप छन् ? उनले बोल्नु पर्दैन ? बुढीगण्डकी, मेलम्ची, एनसेल, टेलिकमको फोर जी, जग्गा प्रकरण लगायतका विषयमा प्रचण्ड नबोल्नु रहस्यमय छ ।
सरकार नेकपाको भविश्य प्रचण्डको हातमा
लामो समय नेकपा माआवादीमा रहँदा प्रचण्ड लगायत नेकपाका नेता र अहिलेका अधिकांश मन्त्रीहरुसग निकट सम्बन्धमा रही काम गरेका श्रेष्ठ वर्तमान सरकार र नेकपाको भविश्य प्रचण्डको हातमा रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ एमाले र माओवादी केन्द्र एकताहुँदा जुन ५ बुँदे सहमति भएको छ, सो सहमति अनुसार आलोपालो प्रणालीमा यदि प्रधानमन्त्री ओली गएनन् भने मलाई लाग्दैन प्रचण्ड मखमली गद्दामा सुतेर बस्छन् । उनी अवश्य एक्सनमा जान्छन् । ’
भएको सहमति पालना नभए सरकार ढल्ने र नेकपा फुट्ने श्रेष्ठको संकेत थियो ।
सेटिङ राज्य प्रणाली
सरकारका गतिविधि हेर्दा अधिनायकवादतर्फ गएको पुष्टि हुन्छ । मैले त यो सरकारलाई ‘ सेटिङमा चलेको राज्य प्रणाली ’ भन्ने गरेको छु । यो अर्थमा कांग्रेसले भन्ने गरेको ‘अधिनायकवाद’ र मैले भन्ने गरेको ‘सेटिङ राज्य प्रणाली’ एउटै हो ।
सरकारले निरंकुशताको यात्रा थाल्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । नेपाली जनता कुनैपनि किसिमको निरंकुशता स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।
मुलुकको विकास गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ । हामीले सरकारसंग संविधान संशोधनका लागि राखेका विषय मध्ये यो पनि एउटा महत्वपूर्ण बुँदा हो । अझ हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेका छौं । यो प्रणालीमा जान संविधान संशोधन अनिवार्य छ, यो नै सुधारको उपाय हो ।
अर्को हामीले भनेको एघार प्रदेश ( दश प्लस एक ) को अवधारणा हो । तत्कालिन संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार एघार प्रदेशमा जानु नै उत्तम हुन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि नागरिकताको विषयलाई पनि हामीले उठाएका छौं । नागरिकता वितरणमा संविधानमा भएको विभेदकारी व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी छ ।
चाँडै सरकार छोड्ने
संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भैरहेको छ । हामी यो प्रक्रिया सकिने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीसंग संविधान संशोशनका विषयमा स्पष्ट कुरा राख्छौ । उहाँ हाम्रा कुरा मान्न तयार हुनुभयो भने, ठीकै छ, अन्यत्रा तत्काल सरकार छोड्छौं ।
अहिले हाम्रो अवस्था भनेको सत्तापक्षसंगै विपक्षी जस्तो देखिन्छ । हामी निर्णयको तयारीमा छौं । चाँडै निर्णय हुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएपछि सडक आन्दोलन गर्न हामीलाई कसले रोक्छ ?
समुन्नत संघीय समाजवाद मान्नेसंग एकता
हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त ‘सम्मुनत संघीय समाजवाद’ भएकाले यो सिद्धान्तमा आउने जो सुकैसंग पार्टी एकता हुन्छ । राजपासंग पार्टी एकताको सम्भावना कायमै रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘ सबैको आ–आफनो खालको समाजवादको व्याख्या छ, तर हाम्रो पार्टीले लिएको नीति र सिद्धान्तलाई मानेर आए नेकपा र कांग्रेससंग पनि एकताको सम्भावना रहन्छ । ’